နာမည်ကျော် K-pop အဖွဲ့ “SuperM”
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ထိပ်သီးအေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ SM Entertainment ရဲ့ နာမည်ကျော် K-pop အဖွဲ့ SuperM ဟာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ကြီးမှူးစီစဉ်တဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့စိတ်ကျန်းမာရေးနေ့အတွက် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းက နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) ကနေ ပထမဆုံး အွန်လိုင်းကတဆင့် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့စိတ်ကျန်းမာရေးနေ့မှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံအားပေးသူတွေ အတူတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပွဲမှာ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နာမည်ကျော် အမျိုးသား K-pop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SuperM လည်း ပါဝင် ခဲ့ကြောင်း WHO ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့က မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီခွဲမှာ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
TAEYONG said #BetterDaysForAll.
We agree wholeheartedly, @SuperM ❤️#SuperMxWHO #SuperM#WorldMentalHealthDay#MoveForMentalHealth pic.twitter.com/TvJ029qdie
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကနေ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ကမ္ဘာ့နဲ့အဝှမ်း သတိပြုမိလာအောင် မီးမောင်း ထိုးပြစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီးကြောင့် လူပေါင်း သန်းနဲ့ချီ ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ရောဂါလို စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို အလေးပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
There is gonna be BETTER DAYS for you.
Whatahealing performance, @SuperM!
Like if you agree with us!
🙋🏻‍♀️🙋🏽🙋🏼‍♂️#SuperMxWHO #SuperM #WorldMentalHealthDay#MoveForMentalHealth pic.twitter.com/b8OqVmwbgJ
စိတ်ကျန်းမာရေးနေ့ပွဲကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး (WHO) ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube နဲ့ TikTok တို့ကနေ ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့တာပါ။ SM Entertainment ရဲ့ နာမည်ကျော် SuperM အဖွဲ့ဟာ မကြာသေးခင်ကပဲ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Full-length Album “Super One” ကို ဖြန့်ချိထားသလို Billboard 200 chart မှာလည်း အဆင့် ၂ နေရာ ရခဲ့ပါတယ်။
SuperM အဖွဲ့ဟာ SM Entertainment ရဲ့ နာမည်ကြီးအဖွဲ့တွေကနေ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၇ ယောက်ပါ K-pop အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ SHINee အဖွဲ့က Taemin ၊ EXO အဖွဲ့က Baekhyun နဲ့ Kai ၊ NCT အဖွဲ့က Mark, Taeyong, Ten, Lucas တို့နဲ့ စုဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Topics: K-Pop, SuperM, WHO